फेसबुकबाट कसरी पैसा कमाउने ? घरमै बसेर मोबाइल बाटनै कमाउन सकिने (तरिका सहित ) - Ujyalo Khabar
फेसबुकबाट कसरी पैसा कमाउने ? घरमै बसेर मोबाइल बाटनै कमाउन सकिने (तरिका सहित )
हामी सबैले युट्युबबाट पैसा कमाई हुन्छ भन्ने कुरा त सुनिरहेकै विषय हो। आजभोलि फेसबुकबाट पनि पैसा कमाई हुन्छ भन्ने हल्ला ब्यापक बन्दै गएको छ। त्यसको सत्यता के हो र कसरी गर्न सकिन्छ हेरौं।फेसबुक विश्वकै नम्बर एक सामाजिक सञ्जाल हो।यसमा करिब १.३ विलियन प्रयोगकर्ताहरु विश्वभरबाट जोडिएका छन्। प्राय यसका प्रयोगकर्ताहरुले दिनमा एक पटक फेसबुक खोलेकै हुन्छन्। त्यसैले आफ्नो व्यापार व्यसाय र उत्पादनको बारेमा विश्वलाई जानकारी दिन फेसबुक सजिलो माध्यम बनेको छ।
Next बाँदर नै बसको ड्राइभर